चितवनमा भेटिए- सँसारमै नभएको अनौठो मान्छे ! पुलिसले देख्ने बित्तिकै किन समातेर हत्कडी लगायो ? (भिडियो हेर्नुस) « Etajakhabar
प्रकाशित मिति : ५ असार २०७६, बिहीबार ०६:४७
काठमाडौं- चितवनका फुर्साङ बम्जनको लुक्स देख्ने बित्तिकै सबैजना दँग पर्दछन् । उनको रुप देखेर कति हेरेको हेरै हुन्छन् भने कति तर्सिन्छन् त कति डराएर भाग्दछन् । लागु औषधको कुलतमा परेर छोडेका फुर्साङले आफ्नो जीवनमा आफ्नै चाहनाअनुसार पुरा शरीर, मुख र कपालललाई अर्कै स्वरुप दिएका छन् ।
जीवनका केहि बर्ष लागु औषधको कुलतमा फसेर धेरै कुरा गुमाएका उनले अब बिभिन्न माध्यमबाट युवाहरुलाई लागु औषध सेवन गर्नु हुँदैन भन्ने सन्देश दिदैछन् । उनीसँग पुलिसले हत्कडी लगाएकोदेखि धेरै नमिठा अनुभवहरु पनि छन्, हेर्नुहोस, चितवनमा भेटिए, सँसारमै नभएका अनौठो मान्छे, पुलिसले किन हत्कडी लगायो ?